သာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ 87 1.378 အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအတွက်စွပ်စွဲနေကြသည်။ လေတိုက်အဖြစ်အခမဲ့အခြားသူများက, လက်မှတ်တွေ 500 €နှင့်အတူမိမိကိုယ်ကို Fanning
5 ဇူလိုင်လ 2018 Belz စပိန်နိုင်ငံရေး 0
အဆိုပါစပိန်တရားမျှတရေး မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရှိသည်ဟုမှတ်စရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စမ်းသပ်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းထဲမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ် သရုပ်ပြအကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ငံရေးသမားတွေ, တိုင်ကြားမှုများနှင့်မီဒီယာအစီရင်ခံစာများရာပေါင်းများစွာပြီးနောက်မိမိအစတူဒီယိုနှင့်ဥပဒေရေးရာမောင်းနှင်မှုအတွက်ကြားဝင်ဖို့တရားစွဲဆိုမှုများအတွက်အကောင့်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီ။ အဆိုပါအမှန်တရားတို့သည်ဖြစ်ကြကြောင်း စာကြောင်း်ထမ်းဆောင်လူအနည်းငယ်ကျနော်တို့ကိုသူတို့မှတရားစွဲဆိုမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလျှင် ပါဝင်ပတ်သက် 1.378 အများပြည်သူတာဝန်ရှိသူများ သာဇာတ်ကောင် 166 2015 အကျဉ်းထောင်များနှင့် pretrial မ၌တည်ထားတဲ့အတွက်တရားစီရင်ရေး၏ CGPJ အထွေထွေကောင်စီတွင်ပေးထားသောအချက်အလက်များတွင်ဖော်ပြထားအဖြစ် 2016 82 အတွက် justicieras, ဇူလိုင်နဲ့စက်တင်ဘာလ5အကြား drifts ။
သူတို့ကလူထုပဿဒ္ဓိ, ပင်လယ်ဖျန်အလွန်ဆိုးပိုက်ဥပဒေသိပ္ပံအနံ့နှင့်အရာအတွက်အမြဲတမ်းအများအပြားထောငျခြောများအတွက်တရားမျှတမှု၏ယုံကြည်မှုတိုက်မိ၏အန္တရာယ်အဘို့အမြင့်မားတဲ့သတိပေးချက်အပေါ်တစ်ဦးချွန်ထက်သောမျက်စိငါတို့နှင့်မမျှော်လင့်ဘဲပေါ်ထွန်းသောပါပြီ နေ့စဉ်, ကြှနျုပျတို့နထေိုငျသောအခြိနျမှအဆင်ပြေအောင်မျှဇယားမဟုတ်ဘဲ astral ရှိ၏ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ပြင်းထန်စွဲချက်တိုးပွားလာနှင့်တကွ, "ခိုးယူ" ပြန်သွားဖို့ဖိအားပေးမှအတည်ပြုသင့်လျော်မယ့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်နားလည် လျော်ကြေးပေးမပေးနိုငျသောသူတို့ကိုထိခိုက်ခဲ့စဉ်ထောင်ထဲမှာနေဖို့ရန်အကျဉ်းသားအတင်းအကျပ်။ များစွာသောနိုင်ငံရေးသမားများအဘို့, အများပြည်သူဘဏ္ဍာတိုက်ကျော်ကို run ပြီးအသတ်ခံဘဲလျက်သင်တို့ကိုလိုင်စင်သို့မဟုတ်ကားအာမခံမပါဘဲတစ်ဦးအရက်မူးဒရိုင်ဘာသညျးမခံနိုငျသောတူညီသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အများဆုံးထိခိုက်နစ်နာ, ဆိုလိုသည်မှာအားလုံးနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ် လူနှစ်ဦးမှာတစ်နှစ်နှင့်အတူကွယ်ပျောက်မရနိုင်ပြီးတစ်ဦးတစ်ဝက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ်လေးနှစ်သာစုစုပေါင်းနေရာချထားဖုံးလွှမ်းသည့်အခါတစ်ဦးသိသာနောင်တတရားနှင့်ကောင်းမွန်သောထောင်ထဲမှာအပြုအမူ glimpsed ။ မိဘများမပါဘဲကျန်ကြွင်းရစ်သောတဆယ်နှစ်ပါးသောနှစ်အရွယ်မိဘမဲ့ဖြစ်ကောင်းကဝါကျသို့မဟုတ်ကာကွယ်ပေးသည်သော toga ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုလေးစားမှုနှင့်အတူမယူဆလိမ့်မည်ပေါ့ဆမှုသေးငယ်တဲ့ပုံနှိပ်။
နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုပြန်လာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏ကျယ်ပြန့်အများစု 400 ပြစ်မှုထင်ရှား အကျဉ်းထောင်များ၏ပွတ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာနင်းနယ်နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲကနေသူ့ကိုခွဲခြားသင့်ကြောင်းအရက်ဆိုင်, တစ်ခုခုကိုထူးချွန်အရင်းအမြစ်များကိုရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူ၏အရည်အချင်းမပြည့်မှီ extremis သို့မဟုတ်အရာကိုမကြာခဏယင်းပြစ်မှုအတွက်အာမခံ၏ပုံစံအတွက်တစ်ပေါင်းလဒ်ကိုလက်ခံအတွက်ကုန်သွယ်ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့ က "ဝက်အူချောင်း" ကြမ်းပြင် parquet နှင့်ဆွန်းဟာအထောက် "ဥစ္စာများကိုလုယူ" ၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်နဲ့အတူရယ်စရာပြစ်ဒဏ်အဘို့အဆပ်ဖို့ညစ်ပတ်နဲ့ဝှက်ထားသောပိုက်ဆံ appropriates uncap စေသည်ရာ, အနှုတ်ထားခြင်းထက်သိသိသာသာလျော့နည်းသည်။ Demented, ဒါပေမယ့်ပုံကဒီဒါဖြစ်ပါတယ်။
166 များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ cursados ပိုပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးလျက်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, လှဲသုံးစား, သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ရာဇဝတ်မှုများကို အထက်ဖော်ပြပါကာလ၌, 99 တရားစီရင်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်, သူတို့သည်နီးပါး 73% ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုအချို့အဘို့စာကြောင်းများပါဝင်သည်, ဆိုလိုသည်မှာ, 399 လူတွေပြီးသားသူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံရာတွင်ရှိခြင်းဆန့်ကျင်အကြံပေးသောကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများအတွက်သူတို့နာရှိသည်။
ကျနော်တို့ကတရားရုံးအားဖြင့်စုံစမ်းခြင်းကိုခံရနိုင်ခြင်းမကြုံစဖူးဒိုင်းကာကနေ 17.000 အများပြည်သူရုံးအကျိုးကျေးဇူးထက်ဘယ်မှာပိုပြီး gauging နှင့်အတူပြီးဆုံးခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းရမည်ဖြစ်သည် သာမန်, အ tortious ခွအေနအေရှိရာ "အနာဂတ်" မှသင့်လျော်သောအချိန်နှေးကွေးဖိအားကိုချဲ့ထွင်လာပြီ တစ်ဦးပုရွက်ဆိတ်တစ်ဆင်ဖြစ်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကနှင့်အခြားဤမျှလောက်များစွာသောအကျင့်ပျက်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အကျဉ်းထောင်အတွင်းရှိဝေးနည်းပါးလာရှိပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါတရားစီရင်ရေး၏အထွေထွေကောင်စီ (CGPJ) ရှုပ်ထွေးသော, ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာလာပြီမရှိနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပွားမှု၏တစ်နှစ် 2013 2.173 အတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ 2.173, 1.661 evidential အကြောင်းပြချက်သပ်သပ်ရပ်ရပ်အရေးအသား, ဒါမှမဟုတ်လူအ, ဤအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုလည်းအရေးပါမဟုတ်သည့်၎င်း၏ရေပန်းစားပျံ့နှံ့များအတွက်အာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းစီးပွားရေးပြစ်မှုများနှင့်အတူထုပ်ပိုးလက်နက်ကိုင်မှာသူ့ဟာသူတငျပွအကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည် ပါဝါအတွက်နိုင်ငံရေးပါတီ၏ "အမာခံ" နဲ့ရွံရှာဘွယ်အမှုအနှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်, က "ထောင်ထဲမှာ-spa" ထွက်ခွာပြီးနောက်ကြောင့် empecinados တချို့ထင်ရှားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ shenanigans နှင့်အတူဆက်လက်ရန် "Michelin လမ်းညွှန်" တွင်စားသောက်ဆိုင်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ဆက်လက် ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာတွေ့ရှိနေသည်ဆိုပြဿနာမရှိဘဲထောင်ထဲမှာခြံစစ်ဆင်ရေးအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်လမ်းလျှောက်အပေါ်ကွံကိုစားသုံးကြသည်။
အများပြည်သူအရာရှိများကဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလ 2015 2016 မှ Andalusia နှင့်မက်ဒရစ်မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များများအတွက်တရားစွဲဆိုအဖြစ်မြေပုံ Catalonia အပေါ်ဗဟိုပြုနေသည်က "fichados" ၏ orographic မူလအစနှင့် ပတ်သက်. သူကနှစ်ကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
Andalucíaထိုကဲ့သို့သောလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု, malfeasance သို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်ပြစ်မှုများအတွက်အများပိုင်အရာရှိများမှ 153 တံခါးစမ်းသပ်သို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုမှုစုဆောင်း, မက်ဒရစ်ကာလပေါင်းလဒ် 145 303 / 2015 စဉ်အတွင်း 2016, Catalonia အတွက်တရားခံ၏ထက်ဝက်မှတ်တော်မူ၏။
သူတို့က 105 100 စာရင်းနှင့်လူမျိုးကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကတည်းကနေရီကျွန်းစုသို့မဟုတ် Cantabria ထိပ်တန်းအများပြည်သူအရာရှိများစာရင်းအသီးသီး, ဆွေမျိုးစည်းကမ်းချက်များ၌အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအတွက်တရားစွဲဆို: အခြားဒေတာအချက်။ ဗလင်စီယာနှင့် Asturias ကလည်းဆက်ပြောသည် 51 နှင့် 68 စွဲချက်စွဲချက်တင်။ စာရင်း၏အဆုံး7အကျဉ်းသား Extremadura 5,4Murcia နှင့်အတူ Aragon နေဖြင့်ကစားနေသည်။
တနှစ်တွင် 2014အဆိုပါ CGPJ နေဖြင့်စုဆောင်းဒေတာအရကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဝန်းအားဖြင့်, Galicia အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်အတူ 157 နိုင်ငံရေးသမားများတရားစွဲဆိုခဲ့သည် နှင့် 8 ပြစ်မှုထင်ရှား။ Asturias, 38 နှင့်3ခုနှစ်တွင်; အသီးသီး; Castile နှင့်လီယွန်, 104စွပ်စွဲခံရသူများနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှား; Cantabria အတွက် 1 ပြစ်တင်ရှုတ်ချ; တွင် Catalonia, 178 20 စွပ်စွဲခံရသူများနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှား; Aragon, 53 1 စွပ်စွဲခံရသူများနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှား; Extremadura,7ပြစ်တင်ရှုတ်ချ; တွင် Andalusia, 383 56 စွပ်စွဲခံရသူများနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှား; en Murcia, 80 17 စွပ်စွဲခံရသူများနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှား; en ဗလင်စီယာ, 110 10 စွပ်စွဲခံရသူများနှင့်ပြစ်မှုထင်ရှား။
တိုတို, ဒါမှမဟုတ်လက်၌ပင် quill ကလောင်ငန်းသို့မဟုတ်ကြက်ဆင်နှင့်အတူသက်သေခံရှေ့နေမှတဆင့်သို့မဟုတ်နည်းနည်းလေးသံသယနေစဉ်သို့မဟုတ်ကြံဆတီထွင်မှုငှါ, ပြစ်မှုဆိုင်ရာကုဒ် rewording မှရရှိသွားတဲ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ဖို့တစ်ခုခုလုပ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီးကျနော်တို့အမြဲ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာကွလိမျ့မညျ "အကြွေးစုဆောင်း", ကျနော်တို့မပါဘဲကြောင်းအကြံပြုလို, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ငါတို့ရှိသမျှသည်လှည့်ဖြားသောသူတို့ကိုလည်း၏ "chutzpah" အဖြစ် recover တစ်ခုခု, နတ်ဆိုးကြောက်စရာ, သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ရန်လိုဖြစ်လာကြောင်း, မှတစ်ဆင့်နှင့်မှတဆင့်ကျန်းမာလူဖြစ်ရမှသက်သေပြသည်ဟုဂုဏ်ယူဘယ်လိုတက်လာစဉ်းစား အကယ်စင်စစ်ပြီးစိတ်ပျက် encausado ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောနှောင့်ယှက်တိုင်ကြားစာ, ကို လိုက်. တင်ပြ "Wet-eared အနက်ရောင်ဝတ်စုံ" အဓိကပြဿနာအပြစ်ရှိဖြစ်မည်ဟု, အသိုင်းအဝိုင်းအလုပ်နဲ့သူ့ရဲ့ဝါကျကိုရွေးနှုတ်အဖြစ်, ဝေးနေတဲ့ကြီးမားတဲ့လျော်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းနှင့် "အကျင့်ပျက်" ဝက်ကီလိုမီတာသင်တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုတွေ့မြင်ရတိုင်းအချိန်။
12 အောက်တိုဘာလ, 2017 0
သေးပါမယ်ဒီartículoTweetတစ်ဦးကရောထွေးမြင်ကွင်းရွှေ့ဆိုင်းတလက်ပေါ်အမည်မသိပျော်ရွှင်မှုတွေရှာဖွေရေးအတွက်အရေးပါသောဇာတ်ကောင်မူတည်ပြီးကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်မိသားစုလေထုတင်းမာနေရင်ဆိုင်မျှဝေ [ ... ]
13 နိုဝင်ဘာလ 2017 57
Ada Colau နေဆဲ daisy အသီးအနှံကိုဆွတ်, တဖန်မှတ်စုပေး (ပြီးသားပါလိမ့်မယ်အရာ .. ဟာနတ်သမီးပုံပြင်ခေါင်းကိုင်အမေနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်ရာ) ဒီartículoTweetတဖန် Ada .. Share, အခုကရှိပါတယ် [ ... ]